Ukubulala iintsholongwane kumphezulu womhlaba - UJUAN JUAN
elektroniki kubandakanya ii-Smartphones
Amacwecwe kunye nolawulo olukude
A.Celli brand non ephothiweyo umatshini ilaphu isetyenziselwa ukwenza eli laphu ngoko ke umphezulu nkqu agudileyo. I-spunbond, i-spunlace, i-airlaid yengubo engalukwanga iya kuba yinto eqhelekileyo kwilaphu. Iphatheni leDot, ebhalwe nge-Embossed, eThe ngqo, eMnqamlezweni, eMesh, kwi-EF Texture iya kukhethwa njengohlobo olwahlukileyo lwelaphu elingasetyenziswanga elisetyenziselwa ukusula okumanzi kubandakanya ukusula kosana, ukusula izithambiso, ukusula utywala, ukubulala iintsholongwane, ukusula amakhaya, njl.
Umahluko phakathi komatshini wamaTshayina kunye nomatshini waseJamani kukuchaneka kwepleyiti esongiweyo.
Egqithileyo Iipesenti ezingama-75 zotywala
Okulandelayo: Izisuli ezomileyo (Canister)